China 24kV 200A Bushing Insert fekitari uye vagadziri | Anhuang
Anhuang nyanzvi mu Kuisa Bushing, isu tinopa mhando yepamusoro yehusiku yekuisa. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neIEEE386, uye IEC zviyero.
24kV 200A Kubhururuka kuisa shinda mune yepasi rese bushing tsime kuti ipe zvakafanana basa seyakakosha mutoro kuputsa bushing. Kushandisa bushing inoisa kunoita kuti kumisikidzwa kwemunda uye kutsiva kuitike uye kuve nemazvo. Kuisa mabhushi mukati uye gokora zvinongedzo zvine zvikamu zvakakosha zvezvose zvinorema kubatanidza kubatana. Iyo bushing Insert inoshandisa patenteni zvachose nzira yazvino, iine imwe chete yazvino yekuchinjisa poindi, mukati meiyo yekuisa yega. Iko kusanzwisisika kweiyo yazvino nzira dhizaini kunopa yepamusoro, yakavimbika kuita.
Iyo yemukati broach inobvumidza yakanaka torque-inodzorwa kumisikidzwa. Uchishandisa iyo yekusarudzika yekuisa torque chishandiso, iyo bushing yekuisa inogona kunyatso simbiswa mukati meiyo bushing zvakanaka pasina kutya kwekukanganisa kupaza iyo bushing tsime stud. Simba rakasarudzika latch chiratidzo mhete, iri pane denderedzwa infence yeiyo bushing's collar, inobvisa fungidziro yemutoro kuputsa kugokora kuiswa kweiyo bushing yekuisa
Iyo inopenya yero mhete inopa pakarepo mhinduro kuti uone kana gokora rakaiswa zvakanaka pane inoisirwa.
Iwo maSingle-pass casing majoini akaumbwa achishandisa mhando yepamusoro sarufa-yakaporeswa kuputira uye semi-conduction EPDM rabha. Kana uchinge wasangana nechinhu chakaenzana chakayerwa, iyo yekuisa bushing inopa yakazara yakadzivirirwa uye inowedzererwa kubatana kweiyo mutoro yekuzorora kushanda.
1.INSULATION: Yakakwira mhando, peroxide-yakaporeswa EPDM rabha yakagadzirirwa, yakavhenganiswa uye kuumbwa mukati-imba kuitira inoenderana uye yakavimbika munda mashandiro.
2.LATCH INDICATOR RING: Yakaumbwa-mune yakajeka yero mhete inobvisa kugokora kumisikidza yekufungidzira nekuvimbisa yemhando kubatana.
3.SEMI-YEMAHARA SHIELD: Yakakwira mhando EPDM rabha inopa inodzivirira yakafa yekumberi nhovo inova nechokwadi chekuti vane grounding.
4.CONTACT HOLDER: Mhangura chinhu chinoshandura chazvino kubva pisitoni-kuonana kune bushing tsime stud.
5.THREADED BASE: 3/8 "-16 UNC Mhangura tambo dzinopa kubatana kune bushing tsime stud.
6.HEX BROACH: 5/16 ”hex broach inobvumidza kuisirwa kuenderana ne torque chishandiso.
7. KUKUDZIRA ZISO: Matabhu matatu akaumbwa kuita semi-kuitisa nhovo yekubatanidza tambo yepasi kuchengetedza kufa kwekumberi chengetedzo.
8.ARC SNUFFER ASSEMBLY: Arc-ablative plastiki inogadzira arc yekudzimisa gasi panguva yemutoro break break switching mashandiro.
9.SEMI-CONDUCTIVE SHIELD INSERT: Yakakwira mhando EPDM rabha inopa echisimba simba uye yunifomu yemagetsi inodzivirira.
200A 24kV Kubvongodza Insert AH DTT-24/200 24kV 200A
Pashure: 15kV 200A Rotatable Feedthru Isa
Zvadaro: 15kV 200A Kubvisa Insert
15kV 200A Yakawedzerwa Yakasungirirwa Loadbreak Bushing ...